Booliska London oo baaraya dhacdo cunsurinimo oo lagula kacay laacibka Mohamed Salah… – Hagaag.com
Booliska London oo baaraya dhacdo cunsurinimo oo lagula kacay laacibka Mohamed Salah…
Posted on 8 Febraayo 2019 by Admin in Sports // 0 Comments
Kooxda West Ham United ayaa ku wareejisay cadeymo booliska Ingiriiska kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen dhacdo cunsurinimo oo ka dhan ah xiddiga Liverpool Mohamed Salah intii lagu guda jiray kulankii Premier League ee London Stadium Isniintii hore.
Fiidiyoow ayaa ku faafay baraha bulshada oo ka hadlaya aflagaado dhinaca afka ah ee loogu gaystay laacibka Masaarida Mohamed Salah oo 26 jirka ah, asaga oo markaasi tuurayey kubad corner ah, ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro 1-1.
“Waxaan ka qeyb galay kulankii West Ham iyo Liverpool, waxaana ka niyad jabay wixii aan maqlay, dadka noocaasi ah uma qalmaan meel ka mid ah bulshadeena, marka lagu daro ciyaaraha kubadda cagta” Taageere ayaa boggiisa Twitter-ka ku qoray.
Bilayska caasimada ayaa ugu sheegay Reuters dhinaca e-mail-ka waqti hore in saraakiishu ay dib u eegayaan fiidiyowga, West Ham ayaa bayaan ku sheegtay in Khamiistii ay u gudbiyeen booliska cadeymo.
“Kadib baaritaan dhamaystiran oo degdeg ah ee weerarkii cunsuriyeed ee loo geystay weeraryahanka Liverpool Mohamed Salah habeenkii Isniinta, West Ham United ayaa xaqiijineysa inay u gudbiyeen cadeymaha Booliska caasimada,” ayaa lagu yiri bayaanka booliska.
War saxaafadeedka ayaa intaa ku daray in kooxda ay si cad u cadeysay mowqifkeeda iyada oo sheegtay in weerarka noocaasi ah aan loo dulqaadan doonin, islamarkaana aysan jirin meel ku haboon dabeecada noocaasi ah.
Xilligii la soo dhaafay, Salah ayaa ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sannadka ee Premier League, ka dib markii uu 44 gool u dhaliyay Liverpool tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii hore.